कृष्णबहादुर महराले पार्टीबाट राजीनामा दिएका हुन ? - Everest Dainik - News from Nepal
कृष्णबहादुर महराले पार्टीबाट राजीनामा दिएका हुन ?
काठमाडौं, चैत २८ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता एवं सभामुख कृष्णबहादुर महराले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा महराले आफूले गत फागुन २७ गते नै पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिइसकेको बताएका हुन ।
सभामुख सबैको साझा हुनुपर्ने भएकाले पार्टीगत जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिने चलन छ । यसअघि अन्य सभामुखले पनि राजीनामा दिएका बताउथे ।
याे पनि पढ्नुस म निर्दलीय भएको छु : सभामुख महरा
तर सभामुखबाट मुक्त भएपछि भने फेरि पार्टीका राजनीतिमा सक्रिया भएको इतिहास रहेको छ ।
साथै सभामुख महराले आगामी वैशाखको अन्तिम साता शुरु हुने संसदको अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने दाबीसमेत गरे ।
‘यसअघि संसदको पहिलो र उद्घाटन अधिवेशन भएकाले सामान्य भयो,’ सभामुख महराले भने, ‘संसदको आगामी अधिवेशनबाट कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउँछौं ।’
याे पनि पढ्नुस सभामुख महराले भने- सरकारले अस्वीकार गरेको इयूको प्रतिवेदन मैले बुझेको छैन, याे सरासर गलत हो
साथै महराले २ वर्षभित्र संसदको आफ्नै भवन बनिसक्ने पनि बताए । संसद भवन सिंहदरबारभित्र पुतली बगैँचामा बनाउन लागिएको छ । आफ्नै भवन नहुँदा संघीय संसद अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवनमा भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
ट्याग्स: Spoken Person Mahara